Abavelisi bengca yomhlaba kunye nabaxhasi | Umzi-mveliso we-China Landscape Grass
Ubungakanani: 30cmx30cm Turf yi-100% yokulwa ukwaluphala kunye ne-UV 2.Isiseko seTurf sikwakwi-100% yokulwa ukwaluphala kunye ne-UV 3. Ke iindleko zinokungaphezulu okanye ngaphantsi. 4.The ubukhulu nobubanzi ifayibha / vulu zingalungiswa ngokweemfuno, ngoko ke iindleko zinokuba ngaphezulu okanye ngaphantsi. 5.Has ukunxiba eliphezulu ukunxiba 6.Environment friendly, ayiqulathanga nayiphi na heavy metals.Harmless ukuba umntu umhlaba kunye namanzi emhlabeni. 7.Resisting ubumdaka, ubushushu, umbane emileyo kunye nengxolo njl Easy ukuba C ...
Ingca yokuma komhlaba yeGadi-302
UKULIMA KWEGADE KUNGASEKHO UMSEBENZI ONZIMA! Ngaba usadikwe kukucheba i-sod? Ngaba uyoyika amatyala angenakufikeleleka ngenxa yokunkcenkceshela ingca? Ngaba unentloni ngegadi enamabala kunye namabala angenakuphepheka kuyo yonke indawo? I-Wanhe Grass ilapha ukuze iphelise zonke iingxaki zakho kunye neenkxalabo malunga negadi. Umbala we-PE + PP Umbala njengemifanekiso nganye okanye ngokobuninzi bePile eyi-5mm-50mm okanye uLuhlobo oluCwangcisiweyo loLuhlu lweeThuthi ezixineneyo 12600m2 okanye uLwabiwo lwesiqulatho soLungiso lwe-Anti-UV; ...
Ingca yokuma komhlaba yeGadi-304
Umbala we-PE + PP Umbala njengemifanekiso nganye okanye ngokobuninzi bePile eyi-5mm-50mm okanye uLuhlobo oluCwangcisiweyo loLuhlu lweeThuthi ezixineneyo 12600m2 okanye uLwabiwo lwesiqulatho soLungiso lwe-Anti-UV; Ubungakanani bePakethe ye-2 2 * 25m okanye i-4 * 25m ngeRoll okanye kwi-Customized Backing Backing PP + engalukwanga / i-PP + yokuphakama komgangatho nge-30mm okanye ngeCustomized Standard Coating Standard SBR Latex / PU Ukuxhasa amaDreyina okuYila amaDreyini amaHolesi Ububanzi be-2 / 4m okanye ubuCwenga obuCwangcisiweyo be-25m okanye uCustomi ...
UKULIMA KWEGADE KUNGASEKHO UMSEBENZI ONZIMA! Ngaba usadikwe kukucheba i-sod? Ngaba uyoyika amatyala angenakufikeleleka ngenxa yokunkcenkceshela ingca? Ngaba unentloni ngegadi enamabala kunye namabala angenakuphepheka kuyo yonke indawo? I-Wanhe Grass ilapha ukuze iphelise zonke iingxaki zakho kunye neenkxalabo malunga negadi. Umbala we-PE + PP Umbala njengemifanekiso nganye okanye ngokobuninzi bePile eyi-5mm-50mm okanye uLuhlobo oluCwangcisiweyo loLuhlu lweeThuthi ezixineneyo 12600m2 okanye uMxholo wentsimbi oCwangcisiweyo ...
IXESHA LEGOLF LOKUBA NOKUBHALA OBUBHALA EMVA KWI-BACKYARD YAKHO! Indawo yeWanhe Grass yegalufa yenzelwe kwaye yenziwa ngokungqinelana nokubekwa kwamava aluhlaza, kubonelela ngobunyani obungenakuthelekiswa nanto ngokubonakala komphezulu kunye nokusebenza. Ukusebenza kakuhle kwayo kuqinisekisa ukuqengqeleka kwebhola ngokuchanekileyo kwaye inikezela intuthuzelo eyonwabisayo ngelixa idlala kuyo. Ngoku unokuba nendawo yokuziqhelanisa amanyathelo nje ambalwa! Inokuba yindawo eyonwabisayo kusapho lonke! Izinto eziphathekayo ze-PE + zePP njengeP ...
Ingca yokuHlengiswa kweMhlaba yokuDlala-90E4
INDAWO YOKUDLALA YOKUDLALA KUYO UKUZE UKONWABELE! Indawo yeWanhe Grass ebaleni lokudlala ngokugqibeleleyo lenza indawo eyonwabisayo yabantwana, abaya kuthi ngokuqinisekileyo bakuthande ukuthamba kwayo nembonakalo emangalisayo. Iimveliso zenziwe ngokwemigangatho yokhuseleko engqongqo (i-DIN, i-Reach, i-RoHS, njl. Abantwana bakho banokudlala kuyo ngaphandle kokuxhalabisa i-allergies okanye ezinye izoyikiso kwimpilo. Ukhetho lwayo lwemibala emininzi ikwenza ukuba udale imimandla eyahlukeneyo yemidlalo okanye iibhodi zomdlalo we ...
Ingca yokuma komhlaba yokuDlala-111
Umhlaba webhola ekhatywayo we-Astro Turf, Ingca yebhola eTurf, Ukuxelisa Ikhaphethi Yengca, Ingca yeGalufa eyenziweyo, Ingca eyenziweyo, Ingca yokwakheka komhlaba yokuBekwa komhlaba,